Hlangana neChihuahua, inja encane kunazo zonke emhlabeni | Izinja Zomhlaba
Ikakhulukazi uma uhlala efulethini noma efulethini futhi ucabanga ukuba nomlingani onemilenze emine ozokwabelana naye iminyaka eminingana yempilo yakho, ngakho-ke akukho okufana nokukhetha inja encane, njenge okumsulwa noma ukuwela chihuahua isibonelo.
Lo boya, yize enedumela lokuba novalo nokukhonkotha kakhulu, uyisiqephu sesinkwa esidinga ukubekezela, uthando nokuhlonishwa ngabantu bakhe. Empeleni, ngemfundo noqeqesho oluhle, ngeke kube nzima ngawe ukumdumisa 😉. Thola.
2 Inzala kanjani inja yeChihuahua?
2.1 Yiziphi izinhlobo zezinja ze-chihuahua ezikhona?
3 Ukuziphatha kanye / noma ubuntu
5 Ungayifundisa kanjani injana yeChihuahua?
I-Chihuahua noma i-Chihuahueño yinja okukholelwa ukuthi ivela esifundazweni saseMexico i-Chihuahua, yize lokho kuyimbono engakaqinisekiswa. Uma lokho sathola izimpande zawo eMexico, kodwa akwaziwa kahle ukuthi ukuphi.
Esingakusho ngokuqinisekile ukuthi amarekhodi amadala kakhulu avela ku-techichi, inja enezici ezifanayo, ezivela ngekhulu le-XNUMX, kepha kungenzeka ukuthi ubevele ehlala namaMaya. Emanxiweni aseChichén Itzá (inhlonhlo yaseYucatán), naphakathi kwemipiramidi yaseCholula, kwatholakala namarekhodi.
I-Chihuahua esiyaziyo namuhla incane kakhulu kunangaphambili. Abaphenyi bakhombisile ukuthi uboya obenza usuku lwethu lwanamuhla babuwele nezinja zaseYurophu.
Inzala kanjani inja yeChihuahua?
I-chihuahua yisilwane esincane: owesilisa ulinganisa ubude obuphakathi kuka-15,2 no-22,9cm lapho ubuna kanti owesifazane u-15,2-20,3cm, yize ezinye zingafinyelela ku-30cm. Inesisindo esiphakathi kuka-1,5 no-3kg. Ungaba nezinwele ezinde noma ezimfushane, ezingaba noma yimuphi umbala (omnyama, ushokoledi, ukhilimu, omhlophe, onsundu…). Inesikhathi sokuphila seminyaka eyi-12 kuya kwengu-20.
Yiziphi izinhlobo zezinja ze-chihuahua ezikhona?
Inhloko ye-Apple chihuahua: kuvame kakhulu. Izindlebe zayo zinkulu futhi zibanzi zihlukene, cishe njalo ziqondile. Umzimba mncane, futhi umsila ujike ngemuva.
Ikhanda lezinyamazane chihuahua: kuyinto enkulu kunalena edlule. Ikhanda lide kakhulu, futhi linomzimba omude futhi ozacile.
Ukuziphatha kanye / noma ubuntu
Yinja uhlakaniphe kakhulu futhi uyabhekisisa, othanda ukubalekela lokho. Kodwa futhi unesibindi, unothando. Uyakujabulela ukuba yisikhungo sokunakwa, kepha ngenxa yalokho nangenxa yokuthi kulula kangakanani ukuwela kumanethiwekhi abo, kufanele uqale ukumfundisa kusukela ngosuku lokuqala abuya ngalo ngenhlonipho nangokubekezela.
Ngokucabanga ukuthi yisilwane esidla inyama, into yemvelo kuyena ukumnika iBarf noma ukudla okwenziwe ekhaya. Kepha, yize leyo kuyindlela engcono kakhulu, uma kungenziwanga kahle kungadala izinkinga zempilo, ngakho-ke uma uthatha isinqumo sokukunika ukudla kwemvelo, thintana nodokotela wezilwane wezilwane. Uzohlola i-Chihuahua yakho bese elungiselela umngani wakho ukudla okukhethekile.
Noma kunjalo, uma ungafuni ukwenza inkinga kakhulu, ungahlala unikeza iYum Diet (kungafana neBarf, kepha ngezithako eziqoshiwe nezixubekile), noma wondle ngaphandle kokusanhlamvu.
Izinwele zalo mfana omncane zingaba mfushane noma zinde, noma kunjalo, kufanele uyikame kanye nsuku zonke zokuphila kwayo. Lapho uqaphela ukuthi iwa kaningi, njengoba kuzokwenzeka ngenkathi yokuncibilika (entwasahlobo), dlulisa ikama kabili ngosuku. Lokhu kuzomsiza ukuthi ahlale epholile, futhi ngeke kudingeke ukuthi ukhiphe kakhulu.
Naphezu kobukhulu bayo, kuyinja enezinga eliphezulu lamandla. Ngalesi sizathu, akusona isilwane ongahlala usibambe ezandleni zakho noma ngaphakathi kwezindonga ezine. Ukuze, uyidlulise nsuku zonke, okungenani kanye, kepha kungakuhle ukuthi ube kathathu noma ngaphezulu.
Uma uchitha isikhathi eside ungenzi lutho, uzobhoreka. Futhi uma eba nesithukuthezi, uzoba nokuziphatha okungafuneki, njengokukhonkotha kakhulu noma ukuhlafuna izinto.
Kuluhlobo lokuthi unempilo enhle kakhulu. Vele, kufanele uthathe ukuze uthole yonke imigomo edingekayo, kanye ne-microchip. Futhi uma ungafuni ukuthi izale, buza udokotela wezilwane ukuthi yiziphi izinketho onazo.
Ungayifundisa kanjani injana yeChihuahua?
Njalo ngokubekezela, uthando nokuhlonipha. Azikho kulezi zinto ezintathu ezingalahleka. Kuyiqiniso ukuthi iChihuahua ingaba nenkani (inenkani), futhi kwesinye isikhathi ingalawuleki, kepha ungabeka imingcele ngendlela enhle ngaphandle kokumemeza noma ukushaya (ngasendleleni, khumbula ukuthi ukuphatha kabi isilwane kuyicala emazweni amaningi, njengoba eSpain).
Kufanele abe nenqubo yakhe yansuku zonke, futhi nawe kufanele ube kuyo. Ngakho-ke mfundise amaqhinga ayisisekelo, anjengokuthi "hlala" noma "woza", zama ukuzivocavoca futhi ujabule, bese ekhaya uzobona ukuthi uzolile.
I-chihuahua puppy emsulwa ibiza cishe ama-euro angama-300, kepha uma ungakhathaleli kakhulu ubumsulwa bohlobo, ungavakashela indawo yokukhosela isilwane noma umvikeli, ngoba imvamisa kukhona amaChihuahuas afuna umndeni obathandayo.
Uma ufuna ukujabulela izithombe eziningi zeChihuahua, nazi ezinye:
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » I-Chihuahua, inja encane kunazo zonke emhlabeni
Ubuhlungu besisu ezinjeni